10 Ajụjụ on Windows Media Player 12
E nwere ọtụtụ iri puku nke Nkuzi na e dere iji jide n'aka na nke na nsogbu ndị na-metụtara Windows Media Player 12 na-abụghị nanị kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe mkpebi na nke a. Na a na nkuzi nile dị otú ahụ isiokwu idewo iji jide n'aka na ndị ọrụ ọkọkpọhi mkpebi nke ndị nkịtị mbipụta n'otu ebe na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa otu nke kasị mma Nkuzi dị ka ọ ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi URL ka nkuzi nakwa iji jide n'aka na na weebụ mgbe achọgharị kpamkpam.
1. Windows Media Player 12 Nsogbu: Ịgbo WMP 12 nhazi Njehie
N'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ kasịnụ mkpebi nke doro nke idu ke eziokwu na WMP 12 na-uninstalled na mgbe ahụ ozugbo reinstalled iji jide n'aka na nsogbu ahụ bụ ọ dịghị ihe ma nke a nkuzi ga-eme ka n'aka na wuru na Microsoft nchọpụta nsogbu ngwá ọrụ bụ mkpebi nke nke. Ọ ga na-edu onye ọrụ kwupụta a ọma a ọkaibe mkpebi na dị nnọọ ole na ole clicks.
2. Olee Ọkụ CD na DVD na Windows Media Player 12
Ndị a bụ ndị kasị mma na ndị ọkaibe usoro na e kwuru n'isiokwu a na-eme ka n'aka na log na-adịgide adịgide search nke onye ọrụ ọgwụgwụ a stellar n'ụzọ. The ọma kọwaa Filiks na mkpokọta usoro na e n'ihu ebe a na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpebi nke nke ma ọ bụ ajụjụ na e kwuru n'elu n'ihi ezi nke usoro
3. Wụnye codecs na WMP 12
Ogo codec echichi bụ usoro na bụ mgbagwoju maka otu ihe ahụ ọ bụkwa otu nke kasị mma na ala nke Filiks na-kwuru na ndị nkuzi. Ọ ga-eme ka ndị ọrụ na-akawanye arụpụta ihe kasị mma n'ime oge na nhazi mbipụta na-kpebiri ka ọtụtụ ndị na ọ pụrụ ịbụ a oru nke ga-eme ka n'aka na mkpebi adịghị mfe mgbe niile. The Bilie screenshots-enye a echiche nghọta:
4. Wụnye Windows Media Player 12 na windows 7
A nkuzi na-ahụ na ndakọrịta mbipụta nke Windows Media ọkpụkpọ na windows 7 na-kpebiri na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ya apụta mgbe ọ na-abịa echichi na reinstallation nke usoro ihe omume ndị windows na e kwuru n'elu. Nzọụkwụ ọzọ ebe a bụ mfe eto na ọkaibe screenshots na e agbakwunyere ga-ahụ na ndị ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
5. ebre FLAC
FLAC bụ a format na-adịghị na-akwado site ọ bụla version nke Windows Media Player ndabara na maka otu ihe ọzọ configurations na-mkpa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nbudata na-eme na a n'ụzọ na dị ruo na-atụ anya nke onye ọrụ. Onye ọrụ ga-dum FLAC akwụkwọ na ụzọ na a pụrụ iji jide n'aka na nhazi na-akwado na arụnyere na Windows Media Player 12 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Media Player na e arụnyere. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na na akwụkwọ a na-agụ na zuru
6. Ndekọ na Windows Media Player 12
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe na-arụpụta mgbe ọ na-abịa doro ajụjụ na a kpọlitere na nke a. Isiokwu e dere dị mfe asụsụ na nzọụkwụ na-esonyere nwekwara bụghị nnọọ mgbagwoju na ike ga-agbaso enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ọgwụgwụ results dị ka kwa ina na-emekwa ka n'aka na ndekọ nhọrọ e mere dị ma ọ bụ tinye n'ọrụ na ndị kasị mma n'ụzọ.
7. nbudata YouTube vidiyo na Windows Media Player
A nkuzi ihe ọzọ ngwá ọrụ dị ike nke na-eme n'aka na YouTube video download ka Windows Media Player 12 dịghị egwuregwu mgbe niile. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ-aga site nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyefewo ha n'aka na onye ọrụ na-ọkọkpọhi results na-ala nke nkà na na akara na ihe ndị a chọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ maara nke na usoro na-kọwara na ọ bụrụ na e a n'oge ọzọ o nwere ike na-emejuputa atumatu-enweghị nke
8. Olee otú igwu egwu AVCHD faịlụ na Windows Media ọkpụkpọ
The AVCHD format bụ ihe na e agbakwunyere n'ime dị iche iche camcorders na mkpokọta nkà na ụzụ nke Panasonic na Sony na-ahụ na a Ọkpụkpọ a na-eji jide n'aka na videos na-otop. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi AVCHD ọkpụkpọ na-enweghị nke na nsogbu. The n'ozuzu usoro na-kọwara n'isiokwu bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na AVCHD format akwadoghi ndabere site ọ bụla Windows Media Player version:
9. Fim MKV faịlụ na Windows Media Player 12 iji Windows 8 na 8.1 pro
The n'ozuzu usoro na terminologies na e kọwara n'isiokwu bụ onye na ndị kasị mma o kasị ama format MKV nwere ike na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke ma ọ bụrụ na terminologies na-abụghị nanị soro ma na-etinyere ya. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na e kwuru na-soro na nke kacha mma n'ụzọ na-kacha mma n'ihi enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge
10. Windows Media Player 12 akwukwọ njehie
Ọzọ dị ike nkuzi nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi mkpebi na 8 mfe nzọụkwụ ọkọbọ-arụ ọrụ mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu
Ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na configurations nke niile nsụgharị nke Windows Media Player bụ ji ekpuchi na Ya mere ụzọ na-kwuru n'elu nwere ike etinyere ọ bụla Windows Media Player gụnyere Windows Media Player 12 ina nke kpebiri n'ime oge na e chepụtaworo onye ọrụ. A dee bụkwa na doro anya na onye ọrụ kwesịrị mgbe inwe mgbagwoju anya mgbe ọ na-abịa dị iche iche nhazi njehie nke WMP nke ụdị ọ bụla na version.
10 nkwụnye ins maka Windows Media Player i nwere mara
3 ụzọ dozie Windows Media Player mkpọka
2 ụzọ na-egwu AVI na Windows Media Player
> Resource> WMP> 10 Ajụjụ on Windows Media Player 12